ပရိသတ်တွေထင်ထားတာထက် ပိုကြမ်းတဲ့ အိမ်စည်အမိုက်စားသရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Ar T ရဲ့သီချင်းဗီဒီယို
လူငယ်​ပရိသတ်​​တွေ အခိုင်​အမာရရှိထားတဲ့ အဆို​တော် Ar T ကတော့ ထူးခြားတဲ့ အသံနဲ့ အမိုက်စားသီချင်းတွေကို ချပြတတ်သူတစ်ဦးမို့ အောင်မြင်မှုတွေများစွာ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အဆိုတော်​တစ်​ဦးပါ။ လတ်​တ​လောမှာ​တော့ Ar T က ​မော်​ဒယ်​ ​ရွှေအိမ်​စည်​ အမိုက်​စား သရုပ်​​ဆောင်​ထားတဲ့ သူ့ရဲ့ သီချင်းသစ်​​လေးတစ်​ပုဒ်​ကို လူမှုကွန်​ယက်​မှာ ​ဝေမျှ​ပေးထားတာ ​တွေ့ရပါတယ်​။ Ar T ရဲ့ သီချင်းသစ်​ထဲမှာ သရုပ်​​ဆောင်​ထားတဲ့ အိမ်​စည့်​ရဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့ အရမ်းကို လန်း​နေတာပါ​နော်​။
မိုမိုလေးချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ပရိသတ်တွေထင်ထားတာထက် ပိုမိုက်နေတဲ့ အဆိုတော် Ar T ရဲ့သီချင်းဗီဒီယိုအသစ်လေးကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
အဆိုတော် Ar T ရဲ့ "Broken Paradise"သီချင်းဗီဒီယိုထဲမှာတော့ အိမ်စည့်ရဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေက ဝါရင့်တစ်ယောက်လို အရမ်းကိုပီပြင်နေတာမို့ ပိုပြီး အသက်ဝင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုတော် Ar T ကတော့ '"ကျေနပ်ရဲ့လား? စိတ်ရှိလက်ရှိဖြိုရတာ.." ကဲ!! စာသားတွေထိရဲ့လား😊.. Quality ကောင်းတဲ့ music video တွေဘဲကြိုက်တတ်တဲ့ ချစ်ပရိသတ်ကြီးအတွက် AR-T ရဲ့ Broken Paradise လို့ခေါ်တဲ့သီချင်းရဲ့ အမိုက်စား music video အသစ်စက်စက်လေး တင်ပေးလိုက်ပီနော်...ကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆို မကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေလည်း ကြည့်လို့ရအောင် ရှဲသွားပေးကြနော်...ဆက်လက်ကြိုးစားပါအုံးမည်။" ဆိုပြီး သူ့ရဲ့သီချင်းဗီဒီယိုအသစ်လေးကို ဝေမျှပေးထားတာပါ။
ပရိသတ်တွေ စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ အဆိုတော် Ar T ရဲ့သီချင်းအသစ်
အဆိုတော် Ar-T ကတော့ သီချင်းကောင်းများစွာကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပြီး၊ ပရိသတ်တွေကိုချပြလေ့ရှိတဲ့ အဆိုတော်တစ်ဦးဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ Ar-Tကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ လပိုင်းလောက်ကလည်း သီချင်းကောင်းတွေ များစွာပါဝင်တဲ့ "Moving Colors " ဆိုတဲ့ သီချင်းခွေလေးကို ထွက်ရှိထားပါသေးတယ်။ မိုမိုလေးချစ်ပရိသတ်တွေလည်း ထင်ထားတာထက်ကို ပိုကြည့်လို့ကောင်းတဲ့​ Ar T ရဲ့"Broken Paradise" သီချင်းဗီဒီယိုလေးကို သဘောကျရင် share သွားကြဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
Source;Ar T's Facebook Page
ကြော်ငြာအတူရိုက်နေကြတဲ့ ခင်ဇာခြည်ကျော် တို့သားအမိသုံးယောက်
"အခမ်းနားဆုံးမေတ္တာ" ကြည့်ရင်း Crush လေးကို အကြည့်တွေနဲ့ချုပ်ဖို့ သင်ပေးလိုက်တဲ့ နေခြည်ဦး